ARIMAHA BULSHADA – Page 2 – War La Helaaba Tallo La Hel
Wakiilka Middowga yurub u fadhiya Dowlad Goboleedka Puntland, Dr. Mahamed Awad Abbas, oo baaq deg deg ah ka soo saaray fatahaadaha QARDHO
Leave a Comment	/ ARIMAHA BULSHADA, MAQAALO, WARARKA
BAAQ DEG- DEG AH QARDHO !! Wakiilka Middowga yurub u fadhiya Dowlad Goboleedka Puntland, Dr. Mahamed Awad Abbas, oo baaq deg deg ah ka soo saaray fatahaadaha QARDHO Bredene – Belgium. Wakiilka Puntland ee Midowga yurub Mudane MA Abbas oo ka tacsiyeeyay musiibada naf iyo maalba leh ee ka dhalatay daadadkii ku fatahay magaalada Qardho …
Wakiilka Middowga yurub u fadhiya Dowlad Goboleedka Puntland, Dr. Mahamed Awad Abbas, oo baaq deg deg ah ka soo saaray fatahaadaha QARDHO Read More »
Gudiga dhexe ee jabhadda Sool Sanaag Cayn Liberation Front (SSCLF) ayaa khaalid Maxamed Muuse Dhiil u doortay gudoomiyaha Jabhadda xoraynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn islamarkaana uu kamid ahaa gudiga dhexe ee jabhada. Warsaxaafadeed ay oo saareen gudiga fulinta oo nuqul kamid ahna soo gaadhay ayaa lagu sheegay doorasho socotay 48 Saac uu helay khaalid …
(Muuqaal) Jabhadaa SSCLF oo Gudoomiye Cusub Dooratay. Read More »
Madaalihii Waaberi oo geeriyooday
Allah ha u naxariistee Madaailhii Waaberi Cumar Shooli oo geeriyooday Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Fanaankii weyn ee Soomaaliyeed Cumar Cabdulle (Cumar Shooli), oo loo yaqiin Madaalaha Hobollada Waaberi. Cumar Shooli ayaa ka titsanaa kooxda fanaaniinta Qaranka ee Waaberi, waxuuna maalmihii lasoo dhaafay Fanaanku ku xanuunsanayey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. …
Madaalihii Waaberi oo geeriyooday Read More »
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay korortay tirada dadka uu cudurka Covid-19 ku haleelay gudaha dalka oo ay haatan gaartay 60 qof, ka dib markii 24-kii saacadood ee la soo dhaafay la xaqiijiyay in 35 qof oo hor leh oo ku nool gudaha dalka ay qabaan xanuunka. Sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay Wasaaradda …
Tirada dadka qaba xanuunka Covid-19 ee Soomaaliya oo maalin qur ah laba-laabantay Read More »
Assange ‘oo si qarsoodi ah ay laba canug ugu dhasheen’ safaaradda Ecuador
Julian Assange ayaa si qarsoodi ah waxa uu u dhalay laba carruur ah intii uu ku noolaa gudaha safaaradda Ecuador ee magaalada London, xaaskiisa ayaa sidaasi shaacisay. Stella Morris ayaa sheegtay inay xiriir lahaayeen ninka iska leh barta Wikileaks tan iyo 2015, labadeeda canugna ay iyada korsanaysay. Waxa ay hadlaysay xilli laga cabsi qabo in …
Assange ‘oo si qarsoodi ah ay laba canug ugu dhasheen’ safaaradda Ecuador Read More »
Tani ma ahan qof dawarsanaya ama tuugsanaya ama qaxooti ay dunidu ciriiri gelisay
Tani ma ahan qof dawarsanaya ama tuugsanaya ama qaxooti ay dunidu ciriiri gelisay. Waa Tarja Halonen, oo ahayd madaxweynihii jamhuuriyadda Finland intii u dhexeysay sannadihii 2000 ilaa 2012-kii. Muddadaas waxa ay Finland ku jirtay liiska wadamada ugu wanaagsan adduunka dhanka horumarka sida amniga, waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan warshadaha iyo shirkadaha waaweyn. Sawirku …
Tani ma ahan qof dawarsanaya ama tuugsanaya ama qaxooti ay dunidu ciriiri gelisay Read More »
Madaxweynaha HirShabelle oo xaqiijiyey inuu karantiil ku jiro muddo toddobaad ah
Madaxweynaha HirShabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xaqiijiyey inuu muddo toddobaad ah ku jiro karantiil la xiriira cudurka Coronavirus, saacado kadib markii ay Caasimada Online sidaas werisay. Madaxweyne Waare ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku yiri: “Ilaaheey uunbaan xanuunsan. Balse OK ayaan ahay. Toddobaadkii tegay ayaan doortay inaan is karantiilo ayada oo ay iga …
Madaxweynaha HirShabelle oo xaqiijiyey inuu karantiil ku jiro muddo toddobaad ah Read More »